Kungenzeka yini ukuthola ama-backlink kusuka ku-Twitter?
Ukuthuthukisa ibhizinisi lakho ku-intanethi kungumyingcele wempi kuphela. Ngemuva kwalokho, udinga ukwenza isayithi lakho libonakale kubhokisini lokusesha futhi nakanjani kumaklayenti akho angakhona. Ngenhlanhla, ukusebenza kwenjini yokusesha kusebenza ngale njongo. Ama-backlink ngokukhethekile angakusiza ukuba uthuthukise ukuqwashisa umkhiqizo wakho futhi udonse ukuhamba kwezimoto njalo kumakhasi akho wewebhusayithi. Ukuze uthole imiphumela ye-TOP ye-Google, phakathi kwezinye izinto udinga eziningi ze-backlink eziphezulu ezivela kumasayithi aphezulu we-PR njenge-Google +, Facebook, Twitter nabanye - retratos grandes fotografos. Izimpawu ezisuka kumawebhusayithi aphezulu ahloniphekile zibonisa iGoogle ukuthi isayithi lakho elidumile liyiliphi. I-Twitter iyathandwa, ihloniphekile, futhi iphakethe eliphezulu lekhasi lekhasi le-PageRank elinganikeza isayithi lakho ngejusi elikhulu lokuxhumanisa kwekhwalithi. Lapha ungakwazi ukukhiqiza eziningi ze-backlink ezisezingeni eliphakeme ngaphandle kokukhokha noma yikuphi amaphesenti. Konke okudingayo ukubhala i-tweet ekhangayo, faka ama-backlink kusizinda sakho kuwo, futhi uma kwenzeka ama-hashtag ambalwa afanelekayo.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngokuningiliziwe ukuthi singathola kanjani ama-backlink kusayithi lakho kusuka ku-Twitter. Ithemba, lolu lwazi luzokusiza ukuba uthuthukise isikhundla sakho sewebhusayithi bese udonsela amakhasimende amaningi.
Ungayisebenzisa kanjani iphrofayela yakho ye-Twitter ngokuxhumanisa?
i-Twitter iyinhlangano yesikhulumi esithandwayo senhlalo evumela ukuthi udale ukubuyisela emuva. Inikeza izindawo ezimbili kuphrofayela yakho ukwengeza isixhumanisi sewebhu. Eyokuqala iyinkambu eyinhloko yephrofayela ngokwayo, kanti eyesibili ingaphakathi kwezinhlamvu eziyi-160 ku-Bio isigaba. Ngaphezu kwalokho, ungathola isixhumanisi kumasayithi adonsa idatha kusuka kuphrofayela ye-Twitter. Imithombo yewebhu ethatha ulwazi kusuka ku-Twitter ibandakanya i-Twellow, Klout, TwitterCounter, Twitaholic, ne-Favstar.
Uma ungenayo i-akhawunti kule mithombo yewebhu, setha iphrofayili yakho ye-Twitter noma uyiguqule ukufaka izixhumanisi kusayithi lakho kokubili insimu yewebhu kanye ne-bio. Ngaphezu kwalokho, cela amakhasimende akho enze okufanayo.
Kunezici eziningana okudingayo ukugcina izixhumanisi zokwakha engqondweni ku-Twitter. Okokuqala, inani elikhulu lezixhumanisi ongazitholela kule platform yezenhlalo akuyikho okulandelayo. Kusho ukuthi abadluli ithrafikhi kusayithi lakho. Kodwa-ke, izixhumanisi ezingezansi ezivela ku-PR ephezulu indawo zinezinzuzo ezinkulu kusayithi lakho futhi zibonisa izinjini zokuthi isizinda sakho sifanele isikhundla esiphezulu ekhasini lekhasi lokusesha. Enye into okufanele uyenze mayelana nokwakhiwa kwesixhumanisi ku-Twitter yilapho zonke izixhumanisi lapha zibukeka njenge-URL enesibindi ngokuphambene nezixhumanisi ngombhalo wegama eliyisihluthulelo. Yingakho udinga ukuqinisekisa ukuthi i-URL yakho ifundeka, icacile futhi ihlelwe kahle.
Inqubo yokwakha izixhumanisi ku-Twitter inezinyathelo ezilandelayo:
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Twitter bese uthumela isixhumanisi sakho
Ungasebenzisa umbhalo othile wokuzijabulisa nokuzibandakanya, hhayi nje isixhumanisi. Ngokushesha nje uma i-tweet yakho ithunyelwe, lolu lwazi luzotholakala kubalandeli bakho.
Engeza i-hashtag ngaphambi kwamagama angukhiye ahlosiwe
Kubalulekile ukusebenzisa ama-hashtag ngaphambi kwegama elingukhiye elilodwa eliphakeme neliphezulu. Hlela ngo-SERP njengoba abasebenzisi befuna ukusesha i-Twitter kuqaliswa ama-hashtag. Ngendlela, ungakwazi futhi ama-hashtag izixhumanisi zakho.
Yenza abalandeli bakho babuyekeze ama-tweets akho
Ama-tweets akho kufanele abambe, aphile futhi akhohlwe ukwenza abasebenzisi babuyekeze wona ngokwakho. Uma uzizwa ungenalo ithalenta kumasu wokubhala, mane ucele abalandeli bakho ukuba babuyekeze isixhumanisi ku-tweet yokuqala.
Hamba kuya ku-TweetMeme
TweetUmeme ungumthombo wewebhu osesheshayo futhi uphendule ama-tweets athakazelisayo kakhulu. Ngakho injongo yakho eyinhloko ukuvela kulawa masayithi wesayithi, ukudala i-tweet ekhanda ngekhanda.